Kedu Ajụjụ na Azịza nke SEO kachasị mma?
Ọ bụrụ na ị na-amalite ịbanye n'ụwa nke SEO, ihe niile nwere ike iyi mgbagwoju anya nye gị. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ narị isiokwu dị na weebụ na-enye ndụmọdụ banyere otu esi ebugharị okporo ụzọ na saịtị gị, ụfọdụ n'ime ha abaghị uru, ebe ndị ọzọ adịghị enye nghọta doro anya banyere nchọpụta ọchụchọ kachasị mma bụ.
Ndị ọkachamara dị elu ghọtara na o siri ike ịbụ ndị na-amalite ịchọpụta ụwa SEO site na ọkọlọtọ. Ọ bụ ya mere anyị ji kpebie na anyị agaghị etinye aka na njirimara nke nyocha njikarịcha search kama kama ịkọwa isi nzube SEO na àgwà ndị dị na ya.
N'okpuru ebe a anyị achọtara ajụjụ ndị a na-ajụkarị banyere SEO. Ihe ọ bụla na-esonyere azịza doro anya na nke dị nkenke. Gụ ha niile ka ha ghọta ihe njikarịcha search engine.
6 Nyocha na azịza SEO kacha elu
1. Ego ole ka ego efu efu?
Nke a na-adabere na mgbaru ọsọ gị na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ. Maka ndị ahụ na-amalite ịmalite na isi ihe, ọ ga-ewe ihe dị ka awa 10 ruo awa iji mee ọtụtụ n'ime ọrụ ahụ n'onwe ha. Ọ bụrụ na a na-eme ihe ziri ezi, mkpọsa ọ bụla na-emefu ego kwesịrị ịkwụsị ịlaghachi karịa ihe e tinyere na mbu. Ọzọ, ihe niile dabere na niche gị na ihe ị na-atụ anya ya.
2. Ogologo oge ole ka ọ na-ewe?
Nke a dịgasị iche iche na-adabere na njedebe nke onye nwe saịtị. Na ihe omume na ị na - enweta ihe ọhụrụ ọ bụla n'otu izu ma tinye ego buru ibu ma ọ bụ oge zuru oke, ọ ga - ewe ruo otu afọ tupu ịmalite ịhụ nsonaazụ ọhụụ. N'ụzọ dị iche, ọtụtụ isiokwu izu ụka, ụlọ njikọ njikọ anụ ahụ, na nkwalite ọdịnaya ọdịnaya bụ ihe ndị ga-enyere gị aka ịhụ nsonaazụ dị ịrịba ama n'ihe gbasara ọnwa ole na ole. Na nkenke, ogologo oge ị na-achụso mgbasa ozi, ihe ka mma ị ga-ahụ. Dị mfe dị ka nke ahụ.
3. Achọrọ M Ịmata Idozi maka SEO?
Nke a bụ aghụghọ. Azịza ya bụ Ee na ee e. Ihe mbụ ị ga - echeta: ịkwesịrị ịchọta nzuzo iji malite SEO. Otú ọ dị, ụfọdụ ihe ndị dị mkpa chọrọ ihe ọmụma nke ebe nrụọrụ weebụ backend. Ugbu a, anyị na-ekwukarị banyere nkọwa nchịkọta na ígwè ọrụ igwe. faịlụ txt. N'ụzọ dị mma, taa, ọ dị mfe karịa afọ ole na ole gara aga ka ị nweta usoro ihe omume nke onwe gị site n'ịgbaso ntuziaka na ntuziaka na ntanetị.
4. Ọ bụrụ na Google anaghị ekwupụta ya Algorithm, kedu ka m ga esi mara ọkwa?
Ọ bụ ihe niile banyere ikpe na njehie ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ enwere. Taa SEO obodo a na-arụsi ọrụ ike na-ekere òkè nyocha na nhazi ọkwa. Ndị mmadụ ghọtara na ha nwere ike ịchọta nkwubi okwu ziri ezi banyere ihe ndị na-emetụta ọkwa site n'ebe ahụ, nke dị oke mma.
5. Olee otu esi choputa okwu di nma iji mee ihe?
Ọ dị mkpa icheta na n'afọ 2017 search algorithms na-adabere na ntụgharị ọchụchọ karịa ka ha na-eme na ibere mkpụrụokwu okwuokwu dị na ibe ahịrị na weebụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-ekwe omume na ị na-ahọrọ isiokwu ziri ezi maka isiokwu ọdịnaya gị. Ị nwere ike ime nke a site n'ịchọ ajụjụ ndị ị na-emekarị na azụmahịa gị, isiokwu ndị na-ewu ewu, na azụmahịa ọ bụla dị mkpa ị hụrụ na ndị na-asọmpi gị adịghị ekpuchi.
6. Kedu ihe bụ "Nri nri"?
Nri nri bụ usoro nke gụnyere ọtụtụ isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu ndị dị na ibe ma ọ bụ weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ịtinye isiokwu na mkpụrụokwu ọ bụla nke ederede, ị na-eri nri. Ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu ahụ nke ọma ma kwuo okwu ụfọdụ na ederede ọtụtụ mgbe, ị na-eri nri. Ihe ngwọta doro anya - emela ihe. Ọ dị njọ maka SEO na onye ọrụ gị.
Anyị nwere olileanya na ịchọtara "ajụjụ SEO na azịza" ndepụta a Source . Nwee obi ụtọ ịchọgharị isi nke SEO!